ABC, သတင်းမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အင်တာဗျူး (မြန်မာပြန်) ~ Nge Naing
ABC, သတင်းမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အင်တာဗျူး (မြန်မာပြန်)
Tuesday, November 16, 2010 Nge Naing7comments
အရှေ့တောင် အာရှသတင်းထောက် ZOE DANIEL က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၁၄-၁၁-၁၀ က မေးထားတဲ့ အင်တာဗျူးကို သြစကြေးလျားက ABC သတင်းမှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။ ဒါကို ကိုနစ်နေမန်း ဘလော့ဂ်မှာ အသံနဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုစာသားကို တင်ထားလို့ ကျွန်မက ပြန်ကူးပြီး အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ရအခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် အဆင်ပြေအောင် မြန်မာလို ပြန်ဆိုတားပါတယ်။ ကိုနစ်နေမန်း ဘလော့ဂ်က ကူးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်လို စာသားကို အောက်ဆုံးမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ ကျွန်မ ဘာသာပြန်မကောင်းပါ။ ဘာသာပြန်ထောက်နေရင် (သို့) အဓိပ္ပါယ်လွဲချော်နေရင် ဘယ်သူမဆို အပြုသဘောနဲ့ ထောက်ပြနိုင်ပါက ၀မ်းသာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ZOE DANIEL: ကျမအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အချိန်ပေးမှုအတွက် များစွာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ။ ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဓိက မှာကြားချင်တာလေးနဲ့ စပြောပြပေးပါလား။
DAW AUNG SAN SUU KYI: ကျမတို့ အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကြပြီး ညီညွတ်မှုဟာ ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ နည်းလမ်းသစ်ကို ရှာဖွေဖို့နှင့် (ဒီမိုကရေစီ) လှုပ်ရှားမှု ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှု ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေပြီးတော့ ကျမတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို ထောက်ပံ့ကူညီတဲ့ လူသစ်တွေနှင့် နည်းသစ်တွေကို တွေ့ရှိဖို့လိုပါတယ်။ပထမပိုဒ်
အောက်ဆုံးပိုဒ် ZOE DANIEL: ဒီလို ဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ သဘာဝအခြေအနေ ရှိတဲ့ မြန်မာပြည်လို နေရာမှာ ဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်မလဲ။
DAW AUNG SAN SUU KYI: ဟုတ်ပါတယ်၊ အခက်အခဲဆိုတာ စိန်ခေါ်မှု တခုဖြစ်ပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကလည်း ကျော်လွှားနိုင်ရမည့် အရာတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ZOE DANIEL: စစ်အုပ်စုနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ ရှိပါသလား။
DAW AUNG SAN SUU KYI: . စစ်အုပ်စုနဲ့ ကျမတို့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းချင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အကူအညီဖြစ်နိုင်တယ် ယူဆရသူတွေ အားလုံးနဲ့ ကျမတို့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်။
ZOE DANIEL: တကယ်လို့ ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေနဲ့ တွေ့ပြီး စကားပြောခွင့် ရမယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာကိုပြောဖြစ်မလဲ။
DAW AUNG SAN SUU KYI: ကောင်းပါပြီ၊ ကျမပထမဦးဆုံး ပြောဖြစ်မှာကတော့ သူနဲ့ စကားပြောဖို့ အခွင့်လမ်း ရဖို့အတွက် ကျမတို့အချင်းချင်း စကားပြောဖြစ်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကို ကျမ တစုံတရရာ ပြောဖြစ်လိမ့်မယ်။
ZOE DANIEL: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့စဉ်ကထက် နိုင်ငံရေး အခြေအနေ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အချိန်ကြာကြီး ထိန်းသိမ်းခံရာက ထွက်လာတဲ့အခါမှာ လက်တွဲလုပ်လာသူတွေ (Your people) လျှော့ပါးသွားတဲ့ အခြေအနေမှာပေါ့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လိုခံစားရသလဲ။
DAW AUNG SAN SUU KYI: ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျမ သိပ်ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ကျမတို့လူထု အတော်များများ ဘယ်လောက် ဆင်းရဲနေကြတယ် ဆိုတာဒီနေ့ ကျမသတိထားမိပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ အကြပ်အတည်းတွေ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နိုင်တဲ့ အခြေအနေကြားက ကျမကိုဒီလို အင်မတန်မှ နွေးထွေးပြီး စိတ်အားထက်သန်စွာ ကြိုဆိုကြတာကို ကျမတကယ်ပဲ ထိတွေ့ခံစားရပါတယ်။
ZOE DANIEL: ရွှေးကောက်ပွဲက (မြန်မာပြည်အတွက်) အခြေအနေ ကောင်းလာတယ် (သို့) ဆိုးလာတယ်လို့ ထင်ပါသလား။
DAW AUNG SAN SUU KYI: လောလောဆယ်တော့ ဘာတခုမှ ပြောင်းသွားတာကျမ မတွေ့ဘူး။ အခြေအနေ ကောင်းလာသလား ဆိုလာသလားဆိုတော့ ကျမ အသေအချာမပြောနိုင်သေးဘူး။ အချိန်အနည်းငယ်တော့ စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ ကျမထင်တယ်။
ZOE DANIEL: ပြီးတော့ ပြည်သူလူထုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တော်တော်လေးကို သူရဲကောင်းတယောက်အဖြစ် မြင်နေပြီး သူတို့ရဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့်သူ အဖြစ် မြင်နေတဲ့အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ပုဂ္ကိုလ်ရေးအရ ဖိအားပေး ခံနေရတယ်လို့ ဘယ်လောက်အထိ ခံစားရလဲ။
DAW AUNG SAN SUU KYI: ကျမက တစုံတခုကို လုပ်ဖို့အတွက် ဖိအားပေးခံနေရသလားလို့ ဆိုလိုချင်တာလား။
ZOE DANIEL: ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖိအားပေးခံနေရလား။
DAW AUNG SAN SUU KYI: ကျမကို ဖိအားပေး ခံစားနေရတယ်လို့ ကျမလုံးဝမယူဆဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ ကျမကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်တာဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုတွေတွေမှာ ပါဝင်ဖို့ ကျမ ဘယ်သူ့ဖိအားနဲ့မှ လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ZOE DANIEL: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက်တခါ ပြန်လည် အဖမ်းဆီးခံရမှာကို စိုးရိမ်လား။
DAW AUNG SAN SUU KYI: ကျမပြန်အဖမ်းခံရမရ ဆိုတာ ကျမမသိပါဘူး။ ဒါက ကျမရဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကျမက ဖမ်းဆီးနေတဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သွားနေတဲ့သူတယောက် မဟုတ်တော့ ဒါကတော့ အဖမ်းခံရနိုင်တယ် ဒါကတော့ အဖမ်းမခံရနိုင်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျမ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဖမ်းခံရလိမ့်မယ်လို့ ကျမမထင်ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမ လုပ်ချင်တာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ZOE DANIEL: အဲဒါ (အဖမ်းခံရခြင်း) ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်နေတာကို ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါလား။
DAW AUNG SAN SUU KYI: မရပ်ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်ရပ်ရမလဲ။ ကျမတာဝန်လို့ ယူဆရတာတွေကို ကျမက လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်။
ZOE DANIEL: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာအစိုးရတပ်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့အတူ ခုအပတ်ထဲမှာတုန်းက ကျမ နယ်စပ်မှာ ရောက်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရယ် ဘယ်လောက်အထိ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထင်ပါသလဲ။
DAW AUNG SAN SUU KYI: ကျမလည်း နယ်စပ်မှာဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေအကြောင်း ကြားရပါတယ်။ ရှင်ရောက်ခဲ့သလို နယ်စပ်ကို ကျမ မရောက်ခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကို ရှင့်လို ကျမ မမြင်တွေ့ရပေမဲ့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမတော်တော် ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဒီပြဿနာကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာတဲ့ နည်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းလို့ရမယ် လက်နက်နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်ဘူး။
ZOE DANIEL: သြစကြေးလျားအစိုးရအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာက အစိုးရတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံအားပေးကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သူတို့ဆီက ဘာတွေလိုအပ်သလဲ။
DAW AUNG SAN SUU KYI: ကျမ သူတို့ကို စကားပြောချင်တယ်။ သူတို့မှာ ဘယ်လိုအတွေးအမြင်တွေ ရှိပြီး ဘာတွေကူညီထောက်ပံ့နိုင်မယ်ဆိုတာ ကျမ သိချင်တယ်၊ အပြန်အလှန် (အသိအမြင်) ဖလှယ်ဖို့လိုမယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ကျမက နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က အခုပဲ ထွက်လာပြီး လူတွေကို ဒီဟာလုပ်ပါ၊ ဟိုဟာလုပ်ပါ၊ ဒီဟာလိုချင်တယ် ဟိုဟာလိုချင်တယ် ဆိုပြီး လူတွေကို လျှောက်မပြောချင်ဘူး။ ကျမတို့ ဘာတွေကို အပြန်အလှန် ကူညီလို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးဖို့ အပြန်အလှန် ဖလှယ်လို့ရတဲ့ တွေ့ဆုံမှုလေးတခု ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
ZOE DANIEL: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စကားပြောရတာ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်၊ အချိန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
DAW AUNG SAN SUU KYI: ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြီးတော့ ကျမတို့အတွက် သြစကြေးလျားပြည်သူတွေ အားလုံးကိုလည်း ကျမတို့အတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ အားလုံးအတွက် ကျမရဲ့ အနွေးထွေးဆုံးအနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားပါစေ။
Posted in: အင်တာဗျူး,ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
November 17, 2010 at 7:20 AM Reply
စစ်အုပ်စု ဆိုတဲ့စကားလုံးထက် တပ်မတော်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ(သို့မဟုတ်)စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ လို့သုံးနှုံးရင် ပိုသင့်တော်ပါတယ်...
November 17, 2010 at 9:00 AM Reply
November 17, 2010 at 11:40 AM Reply
မောင် - ကျွန်မက Military junta ကို စစ်အုပ်စုလို့ ဘာသာပြန်တာကတော့ ဘာသာပြန် အားနည်းလို့ ဒါမှမဟုတ် ဝေါဟာရ အရွေးမှားလို့ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ဒီဝေါဟာရကို ကြိုက်လို့ ရွေးထားတာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မက စစ်အုပ်စုကို အစိုးရတခုအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုလို့ တပ်မတော်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် (သို့) စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မသုံးနှုန်းနိုင်တာကိုတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြံပြုမှုအတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
December 4, 2010 at 5:43 AM Reply
အစိုးရအဖြစ် အသိမှတ်မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း သူတို့က စစ်သားတွေ တပ်မတော်သားတွေဖြစ်တယ် ဒီတွက် စစ်ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့ဝင်တွေ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင်ပိုင်းတွေ လို့ပြောရမှာပဲလေ...ခင်ဗျားတို့ မိသားစုတစ်ခုလုံးကို ဒေါ်ငယ်နိုင်တို့မိသားစုလို့ မခေါ်ပဲ ဒေါ်ငယ်နိုင်တို့ အုပ်စု လို့ခေါ်ရင် ကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်မလား?
December 4, 2010 at 5:49 AM Reply
ရှိနေတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုကို ကိုယ်မကြိုက်လို့မခေါ်ဘူးဆိုတာကတော့ ကလေးဆန်လွန်းသလို အစွန်းရောက်မုန်းတီးမှု အစွန်းရောက် အဆိုးမြင်ဝါဒီ စွဲကပ်လွန်းရာ ရောက်လွန်းပါတယ်ဗျာ....
မူရင်းနာမည်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဒေါ်စုကြည်လို့ခေါ်တာ ခင်ဗျားတို့ရော ဒေါ်စုအပါဝင် မကြိုက်ကြဘူးမို့လား...ဒီလိုဆို ကိုယ့်နာမည်လေးကိုတောင်မှ အပြည့်စုံအမှန်တိုင်းခေါ်မှကြိုက်တယ်ဆိုရင် တစ်ပါးသူရဲ့ အဖွဲ့စည်းမှန်ကိုလည်း ကိုယ်ကလည်း မှန်ကန်စွာ ခေါ်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား....
စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားပြန်လည်ရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အဲဒီလိုအခြေခံကျတဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အခေါ်ဝေါ်ကအစ မုန်းတီးနေရင် အဆိုးမြင်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်မှာလဲ...
December 5, 2010 at 4:42 PM Reply
မိသားစုဟာ မိသားစု အုပ်စုဟာ အုပ်စု ဘာမှမဆိုင်ဘူး ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ မငယ်နိုင်မိသားစုလို့ ပြောရင်ကျွန်မတို့ မိသားစုဆိုတာ လူတိုင်းသိနိုင်ပေမဲ့ မငယ်နိုင်အုပ်စုဆိုတာက အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ Study တခုအတွက် အတူတကွ Research လုပ်တဲ့ အုပ်စုလား၊ ဘလော့ဂါထဲက ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ အုပ်စုလား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှာ ပါဝင်တဲ့ အုပ်စုလား၊ ကျွန်မနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ပါဝင်တဲ့အုပ်စုလားဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဒါကို စစ်အုပ်စုကို စစ်အုပ်စုလို့ ကျွန်မ ခေါ်တာနဲ့ ဥပမာပေးလို့မရပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေါ်စုကြည်ခေါ်တာနဲ့လည်း ဒေါ်စုကြည်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နာမည်ပါမှာစိုးလို့ စစ်အုပ်စုနဲ့ နောက်လိုက်တွေ တမင်သုံးတဲ့ နာမည်ဖြစ်မှန်း လူတိုင်းသိလို့ ဒါနဲ့လည်း ဥပမာ ပေးလို့မရပါဘူး။ စစ်အုပ်စုဆိုတာ တကယ်ပဲ အုပ်စုဖွဲ့ထားတဲ့ အုပ်စုတခု ဖြစ်တယ်။ ဘာကို ဘယ်သူကို ဆိုလိုလဲဆိုတာ ကြားလိုက် ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သူတိုင်း ကလေးကအစ တန်းပြီး သိပါတယ်။ စစ်တပ်တပ်လုံးကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း အားလုံး သဘောပေါက်ပြီးသား ဖြစ်တယ်။ ကပ်ပြီး ယူဆရင်တော့ ကိုယ်လိုရာ ဆွဲယူဆလို့ ရတာပေါ့။ စစ်အုပ်စုက အုပ်စုတခုဆိုတာလည်း မှန်ကန်တဲ့အတွက်အဓိက ကျွန်မဆိုလိုတာ ဘယ်သူကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာလည်း လူတိုင်းသိပါတယ်။
မငယ်နိုင်ပြောမှ ကျနော် အဘိဓါန်လှန်ကြည့်မိတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ့ လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသူတွေကို ကမ္ဘာတဝှမ်း သတင်းတွေထဲမှာ junta, regime ဆိုပြီး အသုံးများကြတာတွေ့မိတယ်။
junta = အာဏာသိမ်း စစ်ဘက်အရာရှိများ (ဂိုဏ်း)၊
regime = အစိုးရစနစ်၊ အစိုးရ၊ စနစ် (ဆိုရှယ်လစ်၊ ကွန်မြူနစ်၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့ အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှင် အစိုးရ စသည်ဖြင့် သုံးကြတာ တွေ့ရပါတယ်။)
ဒီတော့ မငယ်နိုင်က “စစ်အုပ်စု” လို့နာမည်တပ်ရင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အာဏာစက်ကွင်းနဲ့ ကင်းလွတ်တဲ့သူတွေသာ ခေါ်နိုင်ကြတာမို့ မြန်မာပြည်တွင်းက စိတ်ထဲအရိုးစွဲ နေတတ်ကြတဲ့ အချို့သူတွေအတွက် နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်ချင်စရာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် “တပ်မတော်” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကိုတော့ သမိုင်းအရ စာပေအရ အသေအချာ ရှင်းလင်းပြထားတာတော့ မတွေ့မိသေးဖူး။ ဘုရင်ခေတ်မှာ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်ကိုမြှောက်ပင့်ပြီး ကိုယ်တော်၊ ဆင်တော်၊ မြင်းတော်၊ ကျွန်တော်တွေ စသည်ဖြင့် “ရာဇ” အသုံးအနှုန်းတွေ အသုံးပြုရင်း ဘုရင့်တပ်မို့လို့ “တပ်တော်” လို့ခေါ်ရာက စစ်တိုက်ဖို့ လူတွေအတင်းအကြပ် စုရုံးတဲ့အခါ တပ်ရင်း တပ်မကြီးတွေအဖြစ် ကြီးမားလာပြီး ဒီမှာတင် တပ်မတော် ဆိုတဲ့အခေါ် ဖြစ်လာရတယ်လို့ ယူဆရတော့တာပါပဲ။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ဂုဏ်တင်ခေါ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်တစ်ခု ဆိုတာပါပဲ။ စစ်တပ်ဟာတော့ စစ်တပ်ပါပဲ။
နောက်တစ်ဆင့် “အစိုးရ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကလည်း ခက်တော့အခက်သား။ ယေဘုယျအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ချင်လို့ တက်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေကို လက်ခံဖို့ မလွယ်ရတဲ့ကြားထဲ ဒီလူတွေက နေနတ်ဘုရားက ဆင်းသက်လာတဲ့သူတွေလို ကျင့်ကြံတဲ့အခါကျတော့ ထွက်ပေါက်လမ်းကို မမြင်မိပါဘူးဗျာ။
အကျိုးအကြောင်းတွေနဲ့ သင့်တင့်အောင်ပဲပြောပြော မခံနိုင်လို့ပဲအော်အော် မထူးလှတာမို့ တခါတရံလည်း တွေးမိပါတယ်။ “အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး” ဆိုတာဟာ အသေကြီးပါလို့။